Indian abafazi njani umhla kwabo Ngamazwe Uthando - IVIDIYO INCOKO №1 - kuhlangana a kubekho inkqubela okanye guy i-intanethi!
Indian abafazi njani umhla kwabo Ngamazwe Uthando
Ibali reincarnation: Ukufa kwaye Afterlife
Ekhaya, bhiliyoni abantu, i-India ngu ihlabathi ke wesixhenxe likhulu lizweNgenxa yayo inde imbali kwi-ingoma ka-ebalulekileyo orhwebo emiselwe kwezo ndlela, eli lizwe enjoys omkhulu yenkcubeko abarhwebayo kwaye ubutyebi. Surrounded kwi-u-macala ngo i-kofakwano unxweme, i-India ngu bordered nasempuma yi-Arabian Yolwandle kwaye ngasentshona yi-Bay ka-Bengal. Pakistan lies ukuba i-India ke umntlantshona, Ichina kunye Enepal emntla, kwaye Albania lies ukuba umntla mpuma. Stretching malunga nama, ngoko ke zingaphi ukusuka Kashmir kumantla ukuba Koloni Comorin kwi-e-afrika tip, eli lizwe iphethe mixture ezininzi iinkolo, kuquka Christian, Bamayuda, Muslim, kwaye Buddhist, ihamba kunye Indian Hindu, Jainism, Sikh kwaye Zoroastrian beliefs.
I-eyinkunzi, Enew Delhi, lies kwi-umbindi we-emntla yinxalenye lizwekazi, ngexesha izixeko ezifana Bombay (Mumbai) kwaye Madras (Chennai) zikumgangatho unxweme, west kunye mpuma kunye.
Emva elide umzabalazo wenkululeko ukwaphula kude British Empire, i-India baphumelela ekuzuzeni gaining yayo ukuzimela kwaye, namhlanje, sele omnye ihlabathi ke uzile-lokukhula olungenangxaki.
Nangona kutshanje industrialized, eli lizwe uqhubekeka iintlungu ukusuka ama-indlala kunye scant-wonke inkathalelo, ngexesha izixeko ubuso ukwanda iingxaki iqhotyoshelwe ukuya emoyeni pollution.
Indian usapho ke umqolo ngobukhulu ukusuka abo kuquka ezintathu okanye ezine izizukulwana bonke abahlala kunye enye indlu le solitary umhlolokazi eyenze ukuba fisiphelo siya kufika kuba herself.
Omkhulu, beautiful kwaye bewildering, i-India ngu pluralistic, multilingual ezininzi-zilandelayo, kwaye yayo abemi ngabo abafazi. Ngoko ke, yintoni kukho ukwazi malunga free kwaye omnye girls ukususela kweli intriguing lizwe. Baya ufuna babe yakho bride? Kuyenzeka baya ufuna enye kwaye ukuchitha bubonke ubomi babo kunye nawe? Indians, jikelele, ingaba kakhulu hospitable kwaye welcoming, nkqu amahlwempu aya kwenza zabo utmost ukwenza visitor bonwabile. Ngeli xesha uninzi neeyantlukwano phakathi iinkcubeko hayi kakhulu ukubaluleka, ingakumbi phakathi iintsapho nabahlobo, Indians bonisa isempilweni ngokubhekiselele ngenxa yabo unqulo amanani kwaye governmental iinkokeli.
Ngoko ke, xa usenza kuya kuba ke, khumbula ukugcina i-vula
Kwi-i-India, abantu bakholisa ukuba umthetho i-roost, ngeli females ngokuqhelekileyo bahlala deferential, ingakumbi kooyise, zooyise umthetho, kwaye abayeni babo. Kwaye nangona yena alinakukhuselwa kakhulu choosy malunga yobuhlanga, umbala okanye creed, okanye ukuya kwezi phezulu malunga omnyama imigca enqamlezeneyo kwaye mhlophe imigca enqamlezeneyo, kukho izinto ezimbalwa imithetho masiko malunga apho kufuneka lumkela phambi intlanganiso i-Indian elonyuliweyo. Xa ke urhulumente kuba Muslims, Amayuda, kwaye Ngamakrestu ukubangcwaba abafileyo babo kulo iindawo zamangcwaba kwaye ithemba kuba ubomi eparadesi emva kokufa, Indian beliefs malunga kwakhona emva kokuhluma yomphefumlo vary ukusuka inkolo ukuba inkolo. Ngamnye Empuma inkolo ithe eyakhe ezithile nenkolo na ukwenza kunye imizimba lwabafileyo i-Zoroastrians, umzekelo, shiya corpses eboniswe kwi-ezibini atop ilitye structures ngokuba Kweencopho ka-Cwaka. I-Isihindi yavakalisa bakholelwa ukuba reincarnation ivumela umphefumlo kuba reborn kwakhona kwaye kwakhona ngoko ke, njengoko amava yonke imiba yobomi, kodwa umjikelo halts xa ngomhla wokugqibela umphefumlo ngu elevated entsha ephakamileyo inqanaba bukho. Baye kanjalo kuba nzulu nenkolo kwi-ixabiso nokubaluleka imibala, ukupeyinta kwaye dressing zabo ezahlukeneyo oothixo kwi-shades ngokunxulumene inqanaba prominence kwaye ukugqibelela. Kwi-ukukholwa ukuba umbala linoxanduva wellbeing kwaye isempilweni-bume, Hindis ngokubhekiselele kwaye revere ngamnye yinxalenye otyebileyo osasazo, ukukhetha mhlawumbi omnye ezithile umbala ukuba ubangela kuye okanye yakhe tranquility kwaye ulonwabo. Mhlophe ngu supreme, ekubeni end ngenxa enyanisweni zonke ezinye imibala xa olubuyiselweyo ngaphandle osasazo. White no emptiness kwaye bhabhilon kwaye sele isakhono zolile kwaye relax umzimba nengqondo, zinika ngaphakathi uxolo omnye ke ngaphakathi umphefumlo.
Symbolically, mhlophe uthetha inyaniso, eharmony, ulonwabo kwaye ukugqibelela, nangona ngamanye amaxesha, ekubeni umbala yokufa kule horizons, unako kanjalo signify negativity.
Umzekelo, ukuba bride okanye atshate umfazi nxibisani herself kwi-nto kodwa mhlophe, absent na umbala, kubalulekile babekholelwa ukuba unhappiness kwaye malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ka-widowhood iya kuba lurking nje jikelele yembombo.
Ngokuqhelekileyo, usikelelekile wena kunye genuine ubufazi qualities ka-ububele, gentleness kwaye warmth, omnye Indian umfazi ngu iselwa ezahlukeneyo, kuye iintanga kwi-Ntshona.
Abathobekileyo nosapho oriented kunye nokuza ukusuka kweli lizwe ukuba amaxabiso ayo yamandulo imicimbi yayo, Indian ladies ngokubanzi landela olwamkelekileyo imigaqo uthando kwaye umtshato, ezama abantu abaya uthando, cherish akhusele kwabo. Kulungile-umbutho xa oko iza ngemihla isiqhelo ka-ukujonga emva kokuba indlu kwaye ngokwenza uninzi ekuphekeni, uninzi Indian girls iya kuba abanye uhlobo yengqesho. Ekubeni ebukekayo kwaye kulungile-educated, bamele fond ka-studying kwaye uza kuthatha uhambo ngomsebenzi oluya nemfundo ukuze earn ngaphezulu imali baze bazuze ukuzimela. Nangona kunjalo, nkqu xa zabo ukuzonwabisa ngu hectic emsebenzini kwaye uxakekile kuyo yonke imihla chores, Indian umfazi ingu kakhulu adept e ukwazi oko pleases yakhe umntu kukho ezimbalwa kakhulu nationalities abafazi abantliziyo ingaba njengoko ingcali e-ukujonga emva zabo partners. Ngu umgangatho baya kukhula kunye, absorbing kwi family kunye namaqonga iingcambu ukuba yolulela emva kwamawaka eminyaka. Ngenxa olomeleleyo imicimbi yayo, i-India ngu okuthile ezahluka-hlukileyo ukuze amanye amazwe xa oko iza uthando, ngesondo kwaye umtshato, ebizwa-"arranged umtshato"? ekubeni practiced kwi-phantse zonke zoluntu, ngaphandle mhlawumbi yasedolophini eliphakathi iiklasi. Uninzi marriages kwenzeka phakathi boys and girls abathe manqapha-nqapha kuhlangatyezwana nazo kwaye abo bathe abancinane okanye akukho ulwazi omnye nomnye phambi zabo wedding, ngamnye kwaye yonke inkcukacha xa ebe umbutho yi-nabazali babo. Ngenxa yoku, marriages ukuba kuqhubeka ngaphandle umyalelo kwi ezimbalwa ke, abazali bamele wajonga ezantsi kwi njengoko impulsive izenzo passion kwaye ingaba widely termed 'uthando marriages. 'Le into ukuba outsider, mhlophe guy ukusuka Emelika, kuya kufuneka ucinge kwaye kwenzeka imiqathango kunye msinyane iinyawo zakhe betha Indian subcontinent. Ukuze nokuphumelela intliziyo kwaye uthando a fabulous Indian kubekho inkqubela, ke kuyimfuneko ukuba siyabahlonela kwaye baqonde yakhe inkcubeko kunye negqiza upbringing. Kuza kufuneka ahambe kunye iitshati kwaye yamkela yokuba Indian ingcamango womtshato? usebenza kwi-phantse lonke uluntu. Kodwa, hayi worry. Xa watshata, intimacy kwaye passion uza yokuphepha ukusuka wonke pore yakho entsha soulmate, abaya kuba ngaphezulu lizimisele kwaye ngaphezulu experienced kunokuba uninzi abafazi ukusuka kakhulu kwezinye iindawo ehlabathini. Nangona Indians ingaba ngakumbi liberal kwe-baba aliqela eminyaka eyadlulayo, inkcubeko yabo ngu iselwa ezahlukileyo ukususela kuphumla sehlabathi, kwaye omnye bathabathe care xa intlanganiso i-Indian umfazi, nokuba ngaba okanye hayi intlanganiso iza njengesiphumo ukukhangela kwi website okanye nge-casual intlanganiso kwi-rock okanye restaurant. Musa kuba a hurry ukuba rush kwi lascivious budlelwane, thatha ixesha ukufumana ukwazi elonyuliweyo nisolko anomdla, ngenxa yokuba yena ngokuqinisekileyo kuya kufuneka ixesha phambi nkqu ukucebisa: ukuba yena abe anomdla kuwe. Nangona kunjalo, xa yena ngu anomdla, yena, ngaphezu kusenokwenzeka ukuba abe ukukhangela kwaye ilindele a isigxina budlelwane kwaye umtshato, hayi nje casual fling. Ngoko ke, ngesi engqondweni, ke mhlawumbi okulungileyo ukundwendwela lizwe kuba inkqubo eyandisiweyo ndwendwela ukuze kukunika ixesha assimilate i-inkcubeko kunye imicimbi yayo kwaye get ukuba ngenene ukuyazi umfazi wakho amaphupha. Famous kuba yayo cuisine kwaye welcoming umoya, alizukuba yiyo ixesha elide phambi kwenu kuwa ngothando, hayi kuphela nge India kweli lizwe, kodwa kunye yayo inkcubeko, ayo abantu kwaye indlela yabo-ubomi. umntu lowo uza kuba yakho eyona umhlobo, Ngokuqinisekileyo, kunye enjalo ubutyebi ka-indyebo kwaye umdla zephondo, i-India kubonelela ezininzi imisebenzi kuba ukuba bonwabele xa bechitha ixesha kunye yakho umhla. Ukuba ukutya, ukuba kwamanye amazwe, cinga ulwimilanguage, imbali kunye Taj Mahal, bahlangana kwaye kuthetha kunye abahlali kwaye ndikwazi ukuphefumla kakuhle Indian indlela-ubomi. Zama ukuqonda yenkcubeko neeyantlukwano, preferably phambi kokuya ngaphandle kwindlela yakho yokuqala umhla. Umonde yi ubunyulu, i-ngokukhethekileyo omnye xa intlanganiso umntu komnye zilandelayo: iqela. Kuba vula, yazi, kuba considerate kwaye kuba ndonwabe kwaye, xa ufuna ukufumana zakho ezikhethekileyo phupha kubekho inkqubela, yena uya uthando wena hlala nawe kwaye zisani nina zonke pleasures ukuba ke kunokwenzeka ukuba afumane. Uninzi commonly, iintlanganiso ziqhutywa ekhohlo ukuya ulawulo abazali abathi, ngokusebenzisa libanzi izangqa loluntu nabo le"ilungelo khetha", amisele kwaye cultivate oonyana babo neentombi kwi kukhankanywe ngasentla"arranged marriages". Males eliphetheyo. Kwi-i-India, kukho akukho ukulingana phakathi sexes kwi-i-India, ngu kwaye indoda dominated society nabafazi asingawo wamanzi acociweyo kunye efanayo isidima njengoko Entshona ihlabathi. Kaninzi kunokuba hayi, umfazi? ayina oyikhethileyo njengoko abo yena babe umhla okanye abo yena uya ekugqibeleni kuba watshata. Ngowe kunjalo, ke kunokwenzeka ukuba yena uza zange kuvunyelwa ukuba enze izigqibo na uhlobo kungakhange kufunyanwe imvume evela umntu usapho. Xa uyaqonda kwaye yamkela ukuba akuyi ngokuqinisekileyo kuba ezinye izitishi yenkcubeko neeyantlukwano, uzaku kwazi ukuba isigqibo sokuba ngaba mhlawumbi ufuna wasinikela a esifutshane phambi kokuya ngaphandle kumhla. Famous ngenxa yabo imali eseleyo ubuhle, tranquil attitude kwaye womanly iindlela, ezi ngelosi ngabo bafuna abantu ukususela nge-zonke phezu kwehlabathi.
i-intanethi Dating ividiyo ividiyo incoko- ubudala ividiyo ye-Skype Dating free free ubhaliso ividiyo incoko amagumbi Dating ividiyo ye-Skype free ividiyo acquaintance ngaphandle nokubhalisa ne-girls dating abafazi Chatroulette ngaphandle ads Dating ngaphandle ubhaliso kunye phones ividiyo incoko-intanethi ne-girls